Uyifaka kanjani imenyu yeklasi ku-Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Njengomanyano, abasebenzisi abaninzi bafuna okanye bafuna indlela yokuba nemenyu yakudala okanye imenyu kwidesktop ye-Ubuntu 18.04. Kwimeko yobumbano, utshintsho lubandakanya ukongeza i-applet kwimenyu yehlabathi evumela ukuba nemenyu yendabuko. Ngoku kuthweni Ubuntu busebenzisa iGnome njengeyona desktop yayo iphambili, ukufaka imenyu yeklasikhi kulula kwaye kuyakhawuleza kunangaphambili.
Singakwenza oku ngokwandiswa kweGnome, nangona singafuni ukusebenzisa le nkqubo, sinokuhlala sifaka ezinye iidesktops ezinje Cinnamon okanye UMTSHATO. Emva koko siza kuchaza indlela yokufaka imenyu yeklasikhi kwiGnome yethu.
IMozilla Firefox kunye neRetouching ziya kusinceda ukuba sibe nemenyu yemveli yeGnome
Kuqala kufuneka siye iwebhusayithi esemthethweni yolwandiso lweFirefox kwaye ufake ulwandiso Umdibaniso weShell yeGnome. Iplagi eya kusivumela ukuba sifake naluphi na ulwandiso lweGnome. Nje ukuba ifakwe, sivula i-terminal emva koko sibhale:
Kwaye ngoku ukuba konke oku kufakiwe, siza kuya iwebhusayithi esemthethweni yolwandiso lweGnome kwaye sifuna ulwandiso olubizwa ngokuba yiGno-Menu, Oku kuyakwazisa imenyu yeklasikhi ephezulu kwi-Gnome desktop. Zininzi ezinye izinto ezandisiweyo ezenza kube lula ngathi ukuba sifake imenyu yeklasikhi, kodwa iGno-Imenyu sisisombululo esinokuthenjwa esinokuphuhliswa okusebenzayo, ngokungafani nezinye izandiso.
Kodwa kuqala, kufuneka khetha uhlobo lweGnome esinayo kwaye siyifake ngeMozilla Firefox. Nje ukuba ifakwe, kufuneka siye kwisicelo seRetouching okanye isixhobo seGnome Tweak kwaye kwithebhu yolwandiso sijonge ulwandiso ukuze lusebenze. Nje ukuba isebenze, imenyu entsha iya kusebenza. Imenyu yeklasikhi efumana kwakhona imbonakalo yakudala yeGnome kodwa ayikhubazi nayiphi na imisebenzi ye-dock Ubuntu 18.04 enayo ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Uyifaka kanjani imenyu yeklasikhi ku-Ubuntu 18.04
Ushicilelo lwe-5 lwe-OpenExpo Europe ukubheja kuqeqesho olwenziwayo